Fandikàna Ireo Hira Pop Ho Amin’ny Teny Inuktitut · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Jolay 2013 8:37 GMT
Vakio amin'ny teny فارسی, Français, Español, Italiano, বাংলা, Esperanto , Ελληνικά, English
Afaka miara-miaina ve ny kolontsainam-bahoaka sy ireo tenin-janatany? Toa mihevitra izany ireo mpianatra ao amin'ny kolejin'i Inuit, Nunavut Sivuniksavut any Ottawa, Kanada.
Ho anà tetikasam-pianarana, nihira ny dika nalaina avy amin'ilay hira malaza eran-tany “Gangnam Style” ireo mpianatra nisoratra anarana tanatinà fampianarana ny fiteny Inuktitut, nataon'izy ireo tamin'ny teny Inuit ny tononkira izay momba ny fianarana sy ireo hetsika ara-kolontsaina nomena azy ireo tao amin'ny toby. Nitahiry lahatsary ihany koa izy ireo ho fomba iray mahatsikaiky hanandratana ilay sekoly, nefa ny antony mbola ambony noho izany, dia ny hahafahan'ireo mpianatra mampihatra ny tenin-dreniny.
Taorian'io hetsika io, nanohy ny zotrany i Kelly Fraser avy ao amin'ny Nunavut amin'ny fandikàny ireo hira malaza ho amin'ny teny Inuktitut. Iray amin'ireo hira voalohany nadikany ny hira “Diamonds” an'i Rihanna, izay noraisiny feo, noraketina ho lahatsary, ary nakariny tao amin'ny YouTube, izay nahazoany mpijery maherin'ny 65.000.
Miankina amin'ireo tolotra mpampiantrano maimaim-poana tahaka ny YouTube sy SoundCloud, nanomboka nahasintona mpankafy maro i Fraser, izay nihaino ireo dikanteny sy hira nohirainy sy nakariny, tahaka ny “When I Was Your Man” an'i Bruno Mars sy ny “We are Young (Makutuvugut)” an'ny Fun.
Raha nisy ireo tsikera vitsivitsy mikasika ity fifangaroana kolontsaina pop sy tenin-dreny ity, tahaka ny hita ao amin'ireo tsikera vitsivitsy amin'ireo lahatsary YouTube, noraisina tamin'ny lafiny tsara ity fampiasana tsy mahazatra ny mediam-bahoaka ho amin'ny tenin-dreny ity. Nisy ireo mpitsikera sasany niantso azy ho olona faka tàhaka ka nanonona ohatra izay hihiran'ireo tanora Inuit hafa any an-tsekoly ilay hira nindraminy, taorian'ny nahitan'izy ireo ilay lahatsary. Nilaza i Fraser tanatinà tafatafa iray niarahany tamin'ny Nunatsiaq Online hoe: